Left-arm spinner Wellington Masakadza named in Zimbabwe'ls ODI squad
Wellington Masakadza roars after taking a wicket Christopher Lee-IDI/IDI
Wellington Masakadza, who last played an international match in March 2016, has been included in Zimbabwe's ODI squad for the series against Sri Lanka.* The left-arm spinner, who has 15 wickets from 10 ODIs, last appeared in a 50-over international fixture in 2015, against Afghanistan in Sharjah.
The Zimbabwe squad for the only Test of the tour had three recalls - Regis Chakabva, Carl Mumba and Natsai M'shangwe - while uncapped allrounder Nathan Waller was also picked. Solomon Mire, Richard Ngarava and Chamu Chibhabha were left out. Waller was a part of Zimbabwe's squad for the home series against Afghanistan in February but did not get a match. The changes also mean that Mire and Ngarava will have to wait longer for a maiden Test appearance.
*June 28, 4.00am GMT: This story was updated after Zimbabwe Cricket sent out the official release